Ny satroboninahitra satroboninahitra sy ny lalao eo amin'ny heloka bevava an'ny fanjakana sy ny proxy (mpisolovava Meijering mifanohitra amin'i Plasman): Martin Vrijland
Filed in NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	amin'ny 11 Novambra 2019	• 8 Comments
loharanom-baovao: telegraaf.nl (ankavia Plasman, havanana Meijering)
Ny zoma lasa teo dia nisy ny dinidinika nahaliana niaraka tamin'i mpisolovava Nico Meijering avy amin'ny biraon'ny Ficq & Partners malaza ao amin'ny Financieel Dagblad (FD.nl). Avelao aho aloha hiresaka momba an'i Nico Meijering. Raha ny hevitro dia isan'ireo mpisolovava ny PsyOp any Holandy. Mazava ho azy fa fomba fisainana sarotra izany, kanefa dia tokony hianaranao farafaharatsiny ny fahitana azy. Mety ve ny haino aman-jery (miaraka amin'ny mpanao politika, mpitsara, mpisolovava, mpitantana ny fahitana sy manampahaizana amin'ny fahitalavitra sy amin'ny gazety ary ny media sy ny haino aman-jery hafa) amin'ny haino aman-jery (asa fanaingoana miaraka amin'ny PsyOps)? Ny PsyOps dia novonoina tamim-pitandremana ireo sarimihetsika momba ny sarimihetsika izay misy ny olana lehibe amin'ny fiantraikany ara-tsosialy mba hampidirana lalàna vaovao.
Betsaka ny olona handroaka azy io ho zavatra tsy azo tanterahina, satria avy eo tsy maintsy mandeferena olona marobe ianao miaraka amin'ny tsiambaratelo. Na izany aza dia tiako ny hanasongadinana ny lazan'ny fiarahamonina miafina. Manana ny marika ara-kalitao 'miafina' amin'ny anarany mihitsy aza izy ireo. Amin'ny alàlan'ny sora-baovaon'ilay sarimihetsika voafaritra, tsy ny rehetra no tokony ho fantatra amin'ny fitaka sy fitaka; izany no ambany farany.
Na iza na iza izay nanitrika ny tenany teo amin'ny tantara vao haingana, fa ao amin'ny 65 taona lasa izay, dia mety hahita fa ny ra aristokratika dia mampiasa hery bebe kokoa noho ny nasehon'ny media. Raha ny fampitam-baovao dia tranom-bala ny tranobe mpanjaka ary mitaingina kalesy tsara tarehy izy ireo ary manao veloma ny olona isak'izay miverina. Eny, indraindray dia manao asa diplaomatika iraisam-pirenena izy ireo, saingy avy eo, tsy manana hery be dia be izy ireo. Raha vao manomboka misimisy kokoa momba io raharaha io ianao dia ho hitanao fa io sary io dia noforonina tamin'ny alàlan'ny fampahalalam-baovao mitovy ihany. Ny fahefana tena izy dia mbola mitoetra ao amin'ny aristokrasia, ary ny demokrasia dia tsy mihoatra ny saron-tava tokony hanohana ny safidin'ny vahoaka. Tena ireo aristokratista ireo izay ao anatin'ny faritra ambony amin'ireo fiaraha-monina miafina, izay mitazona ny aloka ao amin'ny fiaraha-monina. Izao tontolo izao amin'ny maha-fanabeazana sy haino aman-jery antsika dia tena hafa noho ny ivelan'ny sary miloko. Inona anefa no ataoko isaky ny maraina? Miaraka amin'ny vaovao ao amin'ny radio na ny tantaran'ny DJ maraina. Mifoha amin'ny vaovao sy gazety ary kaopy kafe isika. Tonga tany am-piasana izahay ary ny radio manapoaka ny "vaovao" ao an-tsofinay isaky ny antsasak'adiny.
Mandra-pahatongan'ny hariva, ny sarin-javatra misy antsika dia misy loko ananan'ireo fantsona mahery vaika, ka tsy fantatsika intsony. Eny, vitanao izany, satria mamaky ny haino aman-jery hafa ianao dia manaraka an'i Thierry Baudet ary mahalala tsara izany. Hevero vetivety izany, ary manontania tena amin'ny tenanao raha nisy tranonkala iray na antoko politika iray izay nanondro ny mety hisian'ny fanoherana ao anatin'ny paosin'ny fahefana ihany koa? Nisy tranonkala iray na antoko politika iray izay nanohananao porofo amin'ny horonantsary mba hanehoana ny fomba nanaovana fihetsiketsehana, niarahan'ireo antoko roa nihetsika? Efa nisy tranonkala iray ve, ankoatry ny fisian'ireo faneva hosoka sandoka, nanondro ny mety hisian'ny ny fiasa ara-tsaina miorina amin'ny fotokevitra mitovy amin'izay ihany koa amin'ny sarimihetsika amin'ny sarimihetsika? Famantarana ve izany fa tsy misy io na hoa famantarana hita fa efa nanamarina ny mpanohitra ary tokony tsy maintsy hovana fanodinana miendrika lalana ny sainao? Tokony hangina amin'ireo izay miantso azy ihany izy ireo, ka hieritreritra ianao hoe "Raha misy mitatitra ny hafa dia tsy ho marina izany"?
Efa mba nieritreritra ve ianao ny mety hisian'ny governemanta famatsiam-bola ny tafika proxy hanana alibi noforonin'izy ireo hanafika firenena iray ary hiasa ho mpamonjy mba hametrahana bara-pahefana vaovao (ary haka ny loharano)? Betsaka no nahatsikaritra fa izany no paikady fampiasan'ny CIA. Al Qaida dia midika ara-bakiteny hoe 'ny angona'; miresaka momba ny angon-drakitr'ireo mpiady izay nanofana sy nitondra fitaovam-piadiana Etazonia hiady amin'ny Rosiana any Afghanistan. izay taratasy fanomezam-pahefanaNy tafika dia nanova ny anarany imbetsaka ary fantatsika izao amin'ny anarana hoe IS marketing farany (fantatra ihany koa hoe ISIS na Daesh). Avy aiza no niavian'ny mpiady rehetra? Ny haino aman-jery, tamin'ny alàlan'ny mpitantana ny fahitana toa an'i Jeroen Pauw sy ny mpitsidika ny latabatra dia nahatonga anao hino fa toa tsy ho vita ny hampijanonana ireo mpiady mpirenireny mandeha any Syria. Feno ny tafika proxy izahay. Tsia, tsy ianao sy izaho; ny serivisy miafina. Mitranga amin'ny fomba saro-pady izany ary mifono ao ambadiky ny fitantaran'ny haino aman-jery miafina izay tokony hanome ny mifanohitra amin'izany: Tsy afaka nanakana azy ireo izahay; ireo Syriana rehetra! Ity ambany ity dia manazava fohifohy amin'ny iray amin'ireo pako eto amin'ity script master eran'izao tontolo izao (voalaza ao amin'ny ahy boky vaovao); ilay herisetra mahatsiravina an'i Syria. (Vakio bebe kokoa ambanin'ny horonantsary)
Eny, tsy misy 'mihoatra ny maso'; na koa: ny sarin'izao tontolo izao dia voafaritry ny haino aman-jery sy ny haino aman-jery hafa. Raha mahavita mametraka tafika proxy ny governemanta, ny fanontaniako aminao dia ny hoe mety hanangana governemanta proxy ihany ve ny governemanta hametrahana ny fandaharam-potoana. Afaka mieritreritra an'izany ve ianao? Ianao ve dia tena nandinika an'ireo sary ireo tamin'ny fakana an-keriny Heineken? Efa nijery azy ireo tamin'ny YouTube ve ianao? Eny, makà fijery hafa. (Ary avy eo tohizo ny famakiana ny vidin'ny lahatsary)
Rehefa mitodika ny lasa ianao dia tsy mahazo ny fahatsapanao fa mifampiraharaha amin'ny script amin'ny sary eto isika? "Oh, inona no tsy marina Vrijland. Tsy mba toy izany ny zava-misy teto amintsika tany Holandy. Nomenao trosa maro be ianao.”Ahoana raha toa ny fantsom-panafody amin'ny kodiarana no manipy fantsika amin'ny làlana miditra, ka mitombo ny varotra? Ahoana raha ny fampahalalam-baovao, ny politika, ny polisy ary ny mpitsara dia manao hetsika amin'ny alàlan'ny mpanao heloka bevava hanatanterahana lalàna vaovao? Noho izany dia mila olana amin'ny fiantraikany lehibe eo amin'ny firenena na iraisam-pirenena ianao. Zavatra iray tena manalefaka ny fihetseham-po eo amin'ny vahoaka. Zavatra iray entinao amin'ny fandaharana fifanakalozan-kevitra toa an'i Pauw hanamafisana ny hatezerana sy ny fahatsapana eo amin'ny vahoaka. Avy eo dia nentinao tamin'ny fomba ara-panahy izay nitondrany lalàna izay heverina ho tsy mampino ilay olona. Raha ny voalazan'i Holleeder, mpamono heloka bevava, dia nitarika ny fanekena ny foto-kevitra 'ny vavolombelona satroboninahitra. Izay olona afaka mijoro ho vavolombelona ho takalon'ny fifanarahana amin'ny fitsarana. Mety hahita ny fisie momba ny heloka bevava mihitsy aza ny vavahadin'ny satroboninahitra ary afaka manome karazana fijoroana ho vavolombelona manokana. Avy eo izy dia afaka mandeha any amin'ny mpitsabo plastika haka tarehy vaovao ary avy eo mandeha miaraka amina pasipaoro vaovao mankany (Argentina).
Eny, satria rehefa miasa amin'ny fanjakana miaraka amin'ireo mpanao heloka bevava ianao, dia tsy maintsy raisin'izy ireo foana ny fanoherana avy amin'ny fiaraha-monina manohitra ny lalàna vaovao toy izany, azonao atao koa ny misambotra ny PsyOp indray izay milalao ny tohan-kevitra sy ny fanoherana satroboninahitra toy izany. Misy dia misy tsara mpisolovava marina sy miasa mafy (tsy PsyOp) ao amin'ny firenena ary tsy maintsy resy lahatra azy ireo ny foto-kevitry ny fijoroana vavolombelona satroboninahitra ianao.
Aoka hatao hoe miara-miasa amin'ny mpamono heloka bevava ianao ary azonao antoka fa misy karazana famonoana sy famonoana olona ao amin'ny haino aman-jery (mety efa nitranga, mety ho tonga mora ihany ny PsyOps), avy eo ianao dia afaka miantoka fa mamorona toe-javatra iray ahitana ilay suspect dia miorina amin'ny fototry ny fijoroana ho vavolombelona avy amin'ny vavolombelona satroboninahitra toy izany ary avy eo azonao atao ny miantoka izany ny mpisolovava an'i Ny vavolombelona satroboninahitra toy izany dia voatifitra ho faty. Avy eo dia manana ny endri-tsarimihetsika PsyOp tsara ianao, izay hitsofahanao tsara ny fanekena ny fijoroana ho vavolombelona vavolombelona amin'ny olona (sy ny asa ara-dalàna) ary mamorona fomba fandraisana ianao amin'ny fanokafana ny kitapom-bola ho an'ny programa fiarovana.
Azonao atao ny mifehy ny karazan-javatra rehetra miaraka amin'ireo mpanao heloka bevava manokanao. Fitaovana iray hafa tsara amin'ny crème whip hafa amin'ny tsindrin-tsakafo Holleeder, ohatra:
Toa an'i Meijering, Plasman dia manatevina matetika ny fandaharana amin'ny fahitalavitra. Tamin'ny volana oktobra, dia nanamarika tao amin'ny gazety iray isan-kerinandro fa ny vilany fanampiny hanampiana ny fanampiana ara-dalàna dia "nohanina" nataon'ireo mpisolovava izay manampy mpanao heloka bevava matetika amin'ny fotoam-pitsarana matetika. Ohatra, ny fizotran'ny Holleeder an-tapitrisany dia 'nanampy tanteraka'.
Eny, fa izay rehetra nataon'ny mpanao heloka bevava amin'ny vidin'ny fanjakana dia namorona ny alibi hamadika ny paompy ho an'ireo rehetra mila fanampiana ara-dalàna amin'ny ho avy. Malala-tanana, ireo mpanao heloka bevava ireo!
Ny ady eo amin'ny "mpisolovava ambony" (toa Niantso azy ireo ny Telegraaf) Ny Meijering sy Plasman koa araka izay tiako indrindra dia tafiditra ao amin'ny PsyOp farany indrindra ho amin'ny fanekena feno ny fitsipiky ny satroboninahitra sy ny programa fiarovana. Ireny programa miaro izay tokony hatsangana amin'ny fiarovana ny mpisolovava, ny mpanao gazety, sns sns ny volan'ny fanjakana, sy ny sisa. Ny kitapom-bolam-panjakana dia tsy maintsy misintona malalaka hiaro ny fitsipiky ny satroboninahitra, ary noho izany dia tokony hatao ezaka lehibe iray mba handresena lahatra ny vahoaka. Ny matihanina ara-dalàna dia tsy maintsy resena lahatra ihany koa ny fanekena ny foto-kevitry ny vavolombelona satroboninahitra mba hahafahany hanao ny tenany ho fiarovana. Mandritra izany fotoana izany dia tsy tokony hongotana ny fiarovan-tena (miaraka amin'ny fanampiny) ireo voampanga. Milalao ny haino aman-jery avo ianao amin'ny alàlan'ny fampiasana mpisolovava PsyOp roa, ny iray amin'izy ireo no miaro ny vavolombelona satroboninahitra ary ny iray hafa mpanao heloka bevava (ankoatra izany, mazava ho azy). Jereo eto ireo jitters miolakolaka eo anelanelan'ny roa ao Financieel Dagblad.
I Mocro Mafia ilay Al Qaeda ao amin'ny AIVD antsika manokana ve? Heloka bevava ve izany? Heloka ve i Holleeder? Miatrika heloka bevava proxy ve isika eto? Mankafy ny cocktail ao Arzantina ve i Holleeder? Mipetraka ve i Ridouan Taghi sa manana mpilalao sy / na deepfake manamboatra? Tena nisy tokoa ny fanafihana rehetra tao amin'ny tranobe Telegraaf sy ny Panorama? Tena nisy tokoa ve i Derk Wiersma sa misy olo-mahay lalina ihany koa? Ny hany fantatsika dia ny haino aman-jery mahalala ny fomba handresy lahatra antsika amin'ny alàlan'ny tantara. Ny hany fantatsika dia ny zavamisy alohan'ny media. Ny tantara, toa an'i Nico Meijering, dia mety ho ampahany amin'ny asa fihetsika (an'ny mpisolovava iray PsyOp). Anisan'i ekipan'ny ekipa PsyOp malaza any Holandy ve i Meijering sy Plasman? Miaraka amin'ny Jeneraly Pressure Office (ANP) eo am-pelatanan'i John de Mol, afaka milaza isika fa ny mety sy ny fomba rehetra dia azo atao mba hamitahana ny olona miaraka amin'ny PsyOps ary noho izany dia famokarana vaovao sandoka matihanina.
Ny zava-drehetra dia zava-dehibe ny hoe manomboka izao dia afaka manidy ny rehetra ny fanjakana amin'ny alàlan'ny hoe afaka mijoro ho vavahady satroboninahitra; satroboninahitra satroboninahitra izay nanolotra fijoroana ho vavolombelona mahazatra, mba hahafahan'ny olona mora foana ao anaty gulag. Afaka handresy lahatra ny raharaham-pitsarana ara-dalàna ao Holandy ve i Meijering sy Plasman ankehitriny amin'ny alàlan'ny hilalao amin'ny PsyOp farany misy fiantraikany amin'ity asa ity amin'ny fahatsapany ny filaminana?
Alefaso eto ny boky vaovao "Ny zava-misy araka ny ahitantsika azy":
Lisitry ny rohy loharano: merriam-webster.com, telegraaf.nl (misokatra amin'ny endrika incognito ao amin'ny Google Chrome), fd.nl
Tags: &, nandatsaka, advocaat, mpiaro, heloka bevava, mpanao heloka bevava, deepfake, fd.nl, Featured, Ficq, satroboninahitra vavolombelona, Mafia, Meijering, mocro, mpiara-miasa, Plasman
11 Novambra 2019 ao amin'ny 15: 45
Ny foto-kevitry ny "vavolombelona vavolombelona satroka" dia midika hoe fanekena vavolombelona miafina. Azonao atao ny miampanga zavatra amin'ny olon-kafa izay mety tsy hiseho akory aza. Azo atao mandalo mihitsy. Mpahay mpisolovava tsara, mbola ao ve izy ireo? Ireo izay te-hahita dia afaka manatona mivantana amin'ny Dean du Order of the Attorney amin'ny resaka tsara. Ao no nilazana azy, milalao ny lalao na ho heverina ho sarotra ianao ary amin'ny alàlan'ny fiampangana tsy mazava dia voaroaka ho mpisolovava ianao.
Efa nambarako izany talohan'ny niainantsika tao anaty jadona mangina sy malefaka, voadio. Lehibe ny tsindry vondrona raha saika ny rehetra mandray anjara amin'ity jadona ity. Mpanao mofo izay te handroso dia manamboatra mofo ao amin'io jadona io. Ny olona te-hilalao cop ihany koa dia manao izany amin'ny jadona jadona.
Tsy matoky ny mpisolovava ny tendroko. Raha terena amin'ny tsindry izy ireo dia milaza amin'ny zava-drehetra ny fanjakana ary mitranga mihoatra noho izay heverinao. Soa ihany fa miaina ao anaty fanjakana maha-lalàmpanorenana isika.
11 Novambra 2019 ao amin'ny 17: 39
Tena ... efa nohazavaiko fa tao amin'ny lahatsoratra maromaro.
Lalàm-panjakan'i gulag izany ary tsy ho lasa mofomamy intsony ny fitazonana ireo mpanohitra. Azo antoka fa raha avela hijery eny ambadiky ny varavarana rehetra ny polisy raha tsy misy ny karoka fikarohana (misaotra an'i Ruinerwold PsyOp) sy izay mety ho sahiran-tsaina (misaotra an'i Thijs H. PsyOp) dia afaka maka ny toe-tsaina.
11 Novambra 2019 ao amin'ny 15: 51
Misy afaka milaza amiko ve ny fomba nahitan'ny polisy ny toerana nanafenan'i Heineken tamin'ny mpamiliny. Tsy hitako izay hita taratra ao amin'ny bokin'i Petertje de Vries. Hiasa ho an'ny Fanjakana amin'ny miafina ve izy? Tsia, ny maherifontsika.
Peter R. de Vries ho an'ny fanjakana? Tsisy lehilahy .. ahoana no hahatongavanao any !!
11 Novambra 2019 ao amin'ny 21: 28
Tsy nisy toerana, tsy nisy ny fakana an-keriny, koa tsy maintsy misy
tsy manontany anay hoe maninona no voasoratra ny boky satria adika amin'ny besinimaro io.
A script = script
tokony hino izany isika ary ny mpilalao dia tsy maintsy hifikitra amin'izany raha tsy te hino azy ianao.
Hisy valiny foana izy ireo, script skoto ho an'ny mpandray anjara ary mpandray anjara
ny mpanara-dia izay tsy mahatoky, tsy mitanila. Mirary soa hariva sy mpivahiny malala
11 Novambra 2019 ao amin'ny 19: 22
Mandray anjara amin-kerim-po ihany koa ny ray aman-dreny. Mieritrereta ny tantara Sinterklaas (Holandey Santa / Satana), amidy amin'ny zandriny indrindra eto amintsika. Hahafantatra ny tontolo iainantsika. Tratry ny fety sambatra 😳😉
11 Novambra 2019 ao amin'ny 21: 05
Ity tranonkala ity dia voasivan'ilay tompon'andraikitra, izay efa mazava tokoa izao.
Miaina amin'ny firenena malalaka tsy misy demokratika isika fa ny teny malalaka
Inona ary no hataontsika momba izany?
12 Novambra 2019 ao amin'ny 12: 56
Ny famoronana tsy fitovian-kevitra diso mba hahatratrarana valiny heverina dia fialamboly amin'ireo olona niahiahy fatratra, ireo olona ao amin'ny script. Tsy vitan'ny hoe mamitaka ny ondrilahy azo tsinontsinoavina fotsiny izy ireo ao anaty alan'ny gazety an-tsokosoko
Saika nanaparitaka fasika teo imasonao izy ireo.
« Ny dingana voalohany dia ny fametrahana marika, ny dingana faharoa dia fivoahana: ny bokotra fanaovana vaksiny
Nanomboka ve ny fanafihana? Ny psycholance dia efa nomena ilay hazavana maitso ao 2018 miorina amin'ny raharaha Els Borst / Bart van U. »
Total visits: 14.835.963